Isimiso esisebenzayo nenqubo ejwayelekile yezobuchwepheshe ye-MBR edidiyelwe yokusebenza kwemishini. -Izimboni izindaba-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Umgomo wokusebenza nenqubo ejwayelekile yezobuchwepheshe yokuxazulula imishini yokuhlanganiswa kwe-MBR.
Isikhathi: 2020-04-17 Hits: 52
Inqubo ye-Membrane bioreactor (MBR) ubuchwepheshe obusha bokulungisa imfucuza ohlanganisa ubuchwepheshe bokuhlukanisa ulwelwesi kanye ne-biotechnology organical. Isebenzisa imishini yokuhlukanisa ulwelwesi ukubamba isigaxa se-activud kanye ne-macromolecular organic tank ethangini lokuphendula le-biochemical, longa ithangi lokuxazulula lesibili. Ukuqoqwa kwe-sludge ocushiwe ngakho-ke kukhuphuke kakhulu, isikhathi sokuhlala se-hydraulic (HRT) nesikhathi sokuhlala (i-SRT) singalawulwa ngokwahlukile, nezinto zokwakha ngokungacekeli ngokuqhubekayo zisebenza futhi zonakalisa amandla okuphendula.
Ngakho-ke, inqubo ye-membrane bioreactor (MBR) ithuthukisa kakhulu umsebenzi we-bioreactor ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokuhlukaniswa kwe-membrane. Uma kuqhathaniswa nezindlela zokwelapha zendabuko zendabuko, kungenye yobuchwepheshe obusha obuthembisa kakhulu bokwelashwa kwamanzi amdaka.
Ukugeleza kwenqubo ejwayelekile:
Lobu buchwepheshe ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokulashwa kwendle, umnyombo wawo bususelwa ekucwilisweni kwe-high membrane ye-fiber membrane eqinile kanye nobuchwepheshe be-bioreaction. Ifaka phakathi i-bioreactor yokumiswa kokumiswa kohlelo lokuhlukanisa ulwelwesi futhi iyisuse esikhundleni sendlela yokuhlukanisa ulwelwesi lwethrafikhi Ithuluzi lesibili le-sedimentation tank kanye nesistimu yokuhlanza isihlabathi ohlelweni lokwelapha olusetshenzisiwe lwendabuko. Isimo salo ukuthi ikhwalithi yamanzi aphethwe muhle kakhulu, ama-solids amisiwe, i-CODcr, NH3-N, BOD5 kanye ne-turbidity aphansi kakhulu, futhi angakwazi ukusetshenziswa ngokuqondile njengamanzi ahlanekezelwe, njengamanzi angenaphutha wasekhaya ngaphandle kwamanzi okuphuza, ukuhlelwa kwendawo, ukugeza izimoto, njll; amanzi asezimboni, Njengokujikeleza kwamanzi okupholisa noma asetshenziswe ngokuqondile njengamanzi okuphakela ama-osmosis, amanzi akhiqiza i-boiler, namanzi angamaphayiphu ahlanzekile embonini yezobuchwepheshe.
Ulwelwesi olungumbumbulu luvame ukugxiliswa ngqo ethangini le-aeration, lixhumane ngqo nengxube yokusabela yemvelo, futhi amanzi ahlungiwe ayaphonswa ngomfutho omubi wephampu yokuhlunga ukuze enze amanzi angcolile adlule engxenyeni engaphandle ye-fiber hole umsebenzi wokuhlukaniswa okuqinile kwe-ketshezi. Umehluko wengcindezi yokudonswa kwengcindezi engemihle uphansi kakhulu, inani eliphakeme ngamamitha ayi-2.2 kuphela ekhanda lamanzi, futhi amandla adingekayo ekwelapheni amayunithi amanzi mancane. Ngesikhathi senqubo yokuhlunga, umoya udluliselwa ngaphansi kolwelwesi ngesiqhumane.
Ngakolunye uhlangothi, isiphithiphithi esikhiqizwa ukukhuphuka komoya sinomthelela oshubisayo ebusweni bangaphandle be-membrane ye-fiber eyize, engasusa ngokuqhubekayo le nto eqinile enamathela engxenyeni ye-membrane, ivikele noma inciphise ukungcoliswa kwe-membrane noma i-plugging; ngakolunye uhlangothi, le ntambo yomoya ibuye ibe ne-Aeration inganikeza ukusetshenziswa kwe-oksijini okudingekayo kwe-biodegradation. Amanye umoya-mpilo odingekayo we-biodegradation nawo uqedwa ngohlelo lwe-infusion aeration. I-sludge eyeqile ekhiqizwe ekuphenduleni kwemvelo ikhishwa ngokuqondile echibini le-membrane le-ultrafiltration.
Okwedlule: Uyazazi izinzuzo eziphambili zokucutshungulwa kwemishini ye-MBR R
Okulandelayo: Uyayazi inqubo yokuqalwa kwemishini yokuhlanganiswa kwe-MBR?